Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2013
2013-01-26 @ 09:34 in Ankapobeny
Mangorohoro mitambolimbolina ny janoarin'ny tsirairay ao anaty ao . Toa manahy, toa manam-po hisy zava-mitranga hafahafa izany. Misy likiliky anaty tiana avoaka nefa ahodin'ny sasany sy ameloman'ny sasany fankahalana foko, indrindra ny foko Merina.
Merina st Karana
Tsikaritra tsy asiana fihetseham-po, na dia samy zava-dratsy sy tsy tokony hisy hitranga eto amin'ny firenena aza ireo zava-droa loha ireo, no ilazana fa ny famelezana ny Merina no mora sy azo atao kokoa eto amin'ny firenena noho ny famelezana Karana. Raha izany no jerena dia ny Merina no manambaka ny mpiray tanindrazana aminy kokoa noho ny Karana, ny Merina no manalika ny hafa kokoa noho ny Karana, ny Merina no tena manandevo mpiasa kokoa noho ny Karana. Tsy miteny aho hoe maninona raha ny Karana no asiana fa mampieritreritra ny tsirairay aho hoe mitondra mankaiza moa ny fankahalàna ary inona no ho vokatr'izany? Ny karazan'olona inona na foko avy aiza dia tsy maintsy ahitana ny antsoina hoe "Saonjo iray lohasaha ka tsy hilaozan'izay mamarara", tsy ny saongo iray lohasaha no mamarara fa misy ratsy ao.
Tsikaritra ihany koa mifanila amin'izany fa tsara aro kokoa ny Karana amin'ny savorovoro noho ny Merina. Nahoana? Ny Karana saiky efa ireo mpanam-bola afa-manakarama na afa-manambitamby mpitandro ny filaminana avokoa noho ny fiarovany ny volany sy ny hareny, hany ka raha vao misy zava-manjò azy ireny dia mihazakazaka ny mpitandro ny filaminana. Ny Merina indray, indrindra ireo mieli-patrana manerana ny firenena, dia mitovy amin'ny Malagasy hafa rehetra ihany, samy mandrato harena, zavatra kelikely tsy tena goavana no ataony, tsy afa-manambitamby mpitandro ny filaminana izany fa mitovy amin'ny rehetra ihany ka tsy atao mahagaga loatra fa raha vao misy ny fandrobàna Merina dia mody tsy mahare na mody tsy taitra ny ankamaroan'ny mpitandro ny filaminana. Tsy misy saosy na tombontsoa manokana tsinona azo avy amin'ny Merina fa mahafinaritra ny ankamaroan'izy ireo ny miteny "patirao" ny Karana. Heveriko fa misy zavatra tsy mety ao anatin'izany fomba fisainana izany ka nahatonga ireny zava-nitranga tany Toliary sy Tolañaro ireny.
Tsy hiteny ny fikonokononana ny fanafihana ireo Merina mpivarotra enta-madinika sy kojakoja an-tokantrano tao Toliary aho fa nanaitra ahy ny filazana hoe tsy taitra akory ny mpitandro ny filaminana (amin'ny ankapobeny) mba nanao izay hampitsoaka ireo olona ireo. Mbola nisy fanafihana Merina ihany taoriana fa dia tahaka izany ihany ny toe-draharaha. Fa rehefa nanao lohateny lehibe ny gazety hoe misy ny fikonokononana hamelezana Karana ao Toliary fa tonga dia henika mpitandro ny filaminana ny tanàna. Lasa ny saina hoe olom-pirenena sokajy ambany kokoa ve ny Merina ka tsy raharahiana fa rehefa Karana no mitady ho voantohintohina dia raikitra amin'izay ny Bemidina? Sa taratry ny fankahalana Merina hatrany amin'ny ambaratongan-drafitry ny mpitandro ny filaminana izany? Enga anie mba ho diso hevitra tanteraka aho.
Voatondro ho manao kiantranoantrano amin'ny fampidirana mpiasa ao amin'ny QMM indray ny samy Merina ka nahatonga ny barazy tao Mandena sy ny fitakiana ny fandroahana ny "voanjo" [Merina] vao nampidirina tao amin'ny orinasa. Kiantranoatrano tokoa ve sa tena izay no vokatry ny fitsapa-pahaizana sa ny Merina no manam-bola kokoa hanaovana kolikoly sa mahafantatra olona ao amin'ny QMM? Ny hitako tany ambadimbadika tany dia niezaka ny hampiditra zanaky ny faritr'Anosy, mba ho tombon-dahiny ho an'ny tanora any amin'iny faritra iny, ilay orinasa. Porofo ara-taratasy entina ijerena ny zanaky ny faritra ny "fanamarinam-ponenana" avy any amin'ny fokontany. Raha nisy izany ny kolikoly dia ny teny anivon'ny fokontany no nisian'izany voalohany ary mametraka ny taratasy ara-panjakana ho tsy misy dikany sy ho mora azo izany. Ka raha manana ny taratasy "fanamarinam-ponenana" ho monina any amin'ny faritra ireo Merina ireo dia tsy misy hadisoan'ny orinasa nampifaninana azy ireo sy nandray izay mahay indrindra avy amin'ireo. Tsy azon'ny orinasa atao indray ny hanao hoe izay avy amin'ny foko Antanosy ihany no raisina satria fanavakavahana mivandravandra sy azo raisina ho fandikan-dalàna.
Zavatra hafa tanteraka indray ny tao an-tsaiko rehefa nahita ny anaran'ilay mpitarika ny fikambanana sy ny mombamomba azy aho. Vadim-bazaha sy azo heverina ho manana toerana ambonimbony ilay ramatoa mpitarika. Heveriko fa tena fankahalàna foko tsotra izao ny tao amin'ity ramatoa ity raha nanao ilay fihetsiketsehana mitady androahana foko eto Madagasikara izy. Ary somary mahagaga ahy kely ihany raha misy antokon'olona toa azy efa manao fihetsiketsehana an-dalambe manohintohina ny fifamoivoizana nefa tsy misy fisamborana avy amin'ny mpitandro ny filaminana nefa raha ny eto Antananarivo no manao fihetsiketsehana an-dalambe tahaka izao efa ela no nosamborina ny mpitarika izany fihetsiketsehana izany. Maninona no manao mizana tsindrian'ila toy izany? Sa ny any tsy manohintohina ny fitondrana ka tsy maninona fa mandrava barazy ihany no atao fa manana hery matanjaka ambadika ilay olona fa ny eto kosa faizina mafy fa miseho ho beloha manohitohitra fitondrana? Amiko anefa dia karazany manao izay hampiroboroboana ny fivorivorian'olona hiròna amin'ny fankahalana Merina, izay mpiray tanindrazana aminy ihany, ny tsy famaizana ireo antokon'olona na mpitarika ireny antokon'olona ireny. Toa mampihevitra fa ao anatin'ny rariny sy tsy manohitra ny ara-dalàna ilay fankahalàna Merina.
Teti-Panorona Frantsay vaovao?
Fa na dia lohahevitra hafa aza dia toa misy fifampitohizana ihany tamin'izay voalaza teo ambony ity tantaraina manaraka ity. Niteraka hatezerana tamin'ny maro ny tenin'ny Masoivoho Frantsay vao tonga tamin'ny tsy hamelana an-dRavalomanana tsy hody mialoha ny fifidianana. Lasa ny adihevitra manao hoe tsy fahalalàna ny zava-misy ve no mahatonga azy hilaza izany zava-manaitra ny mpanara-baovao izany sa tena izay mihitsy no tanjon'ny fitondrana Frantsay eto Madagasikara? Tsy afaka hieritreritra aho fa hiteniteny foana iny rangahy iny tamin'ny nanaovana ilay fanambarana na dia hitahita taratra ihany tamin'ny fitsapa-kevitra nataona fantsona fahitalavitra tsy miankina iray aza fa tsy izany velively ny fironan-kevitr'ireo izay namoaka hevitra nandefa sms tany amin'io fantsona fahitalavitra io. Tsy maintsy hametrapetraka ny hahazoan'ny Frantsay tombony eto Madagasikara izy ary miteraka fisalasalana ny fahamaroan'ny fanafihan'ny dahalo any amin'ny faritra atsimo heveriko ho hafahafa ihany koa ny firoborobon'ny fitaovam-piadiana any amin'ireo lazaina fa dahalo izay lasa efa mahatratra an-jatony. Vao maika nahatalanjona ny fitadiavan'ny minisiteran'ny atitany ny hampidirana ny tafika Frantsay handamina ny raharaha any amin'io faritra atsimo io ihany.
Dia ho kisendrasendra avokoa ve ireo korontana sy savorovoro ary filana ady atao amin'ireo mpitrandraka harena an-kibon'ny tany tsy frantsay rehetra any amin'ny faritra samihafa ireo fa tsy efa teti-panorona napetraka mialoha? Moa ve tsy niniana atao ilay fanambarana hiteraka fankahalàna Fantsay ary iniana avy eo ny fanafihana teratany Frantsay ikendrena hatrany ny hampidirana miaramila Frantsay ho afa-miditra an-tsehatra eto an-tanindrazana? Toa niniana atao avokoa ireo sotasota sy ny fitadiavana ny fomba rehetra ilàna vaniny ireo mpitrandraka vahiny ireo tsy hoe ho fiarovana ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara mba ho tahiry ho an'ny Malagasy fa ny hanomezana azy ireny ho an'ny Frantsay. Efa nisy nilaza ihany moa fa tamin'ny fifanarahana teo amin'ny Malagasy sy ny Frantsay fa na dia mahazo ny fahaleovan-tena aza ny Malagasy dia an'ny frantsay kosa ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara fa tsy azon'ny Malagasy trandrahina raha tsy mahazo alalana avy amin'ny Frantsay. Teboka iray goavana nampiongana an-dRavalomanana ihany koa ny nandikàna io fepetra "miafina" io.
Fehiny, na dia feno efa-taona katroka androany aza ny 26 janoary nandrobana harem-pirenena sy haren'olo-tsotra teratany Malagasy (tsy Karana ary tsy Frantsay fa tratra kosa ny teratany hafa sasany toy ny Afrikana Tatsimo, Maorisiana...) dia heveriko fa ny fitodihana amin'ny hoavy tsy hisian'ny tranga tahaka ireny ao anatin'ny fotoana fohy no nanamarihako ity andro ity. Toa tadiavina iniana atao indray manko ny tahaka ireny tranga faramparany ireny hanodinana ny likiliky tsy afaka any amin'ny tsirairay any, ary tsy kisendrasendra ny nanaovan'ny masoivoho frantsay ny teniny fa tetika hampitodihana ny fankahalana mankany amin'ny Frantsay hanafainganana ny fampidirana ny tafika Frantsay eto Madagasikara hiarovana ireo terataniny sy ireo mizaka ny zom-pirenena ao aminy. Eritreritra ihany anefa ny ahy fa enga anie ho diso ny eritreritro. Ny anongotsongoana ny maty manko, hono, tahotry ny handevim-belona...
Jentilisa 26 janoary 2013